Tsidiho i Florence amin'ny Oktobra | Vaovao momba ny dia
Tsidiho i Florence amin'ny volana Oktobra
Mariela Carril | | Florencia, About us
Volana mahafinaritra i Oktober amin'ny fitsidihana an'i Italia Eny, mbola mafana izy io ary tena mety ho andro fahavaratra tokoa. Marina fa mety orana koa izy io saingy soa ihany fa avy ny orana na ny tafio-drivotra fohy ary ny ataon'izy ireo dia ny fandefasana ny tontolo.
Iray amin'ireo toerana italiana italiana lehibe dia Florencia ary raha misy dia hitanao amin'ity volana ity, handray anao amin'ny tanana malalaka ny tanàna. vaovao, fampirantiana, trano fisakafoananaKilasy voalohany io, ary raha miaraka amin'ny fiara ianao ary efa fantatrao fa tsy afaka miditra amin'ny foibe Florentine ianao dia misy vaovao fijanonana ho an'ny daholobe akaiky!
1 Hetsika any Florence
2 Mitety an'i Florence amin'ny fiara
Hetsika any Florence
Volana iray misy hetsika maro i Oktobra. Ny faran'ny herinandro izay manomboka tsy ho ela, izany hoe ny faran'ny herinandro fahatelo amin'ny volana oktobra, dia atao ny Fortezza da Basso Antiques Fair. Tena fotoana mety tokoa ny mandehandeha, mizaha ary mividy raha maniry hampiasa vola isika.
Raha tianao ity onjan'ny parasy parasy amin'ny Alahady ity dia misy a Tsena Flea any Largo Pietro Annigoni (ny tsena dia nalamina tamin'ny Alahady fahefatry ny Oktobra, raha mila fanazavana fanampiny). Misy trano fisotroana kafe eo akaiky eo hahafahanao mampifangaro gastronomie amin'ny fiantsenana ary tsy ny akanjo ihany fa ny boky, rakitsoratra, fanaka, zavakanto sy maro hafa.
Raha miresaka sakafo, Tuscany Italiana dia tany misy chestnuts ary amin'ny 8, 15, 22 ary 29 Oktobra ny Fetiben'ny Chestnut marradi isan-taona, vohitra an-tendrombohitra ao amin'ny Apennines.
Ny fetibe dia atao any ambanivohitra Mugello, toerana iray fantatra amin'ny kalitaon'ny trangam-tratrany miaraka amin'ny fanondroana ny fiaviany. Mba hahatongavana any, ny zavatra tsara indrindra dia ny mitsambikina amin'ny lamasinina mandao an'i Pistoia, mijanona ao Prato, Florence (toerana ahafahanao mitaingina) ary Pontassieve hipetraka ao Borgo San Lorenzo. Eto ianao miova avy amin'ny fiaran-dalamby taloha mankany amin'ny fiaran-dalamby taloha ary hahafantatra tsara ny fijinjana tratra.
Ankoatra ny chestnuts dia misy truffles eo imasony ary amin'ny 21, 28 ary 29 Oktobra ny Tartufesta, any Montaione. Misy toeram-pivarotana maro samy hafa miaraka amina karazana truffle isan-karazany, ao afovoan-tanànan'i Montaione, izay afangaro amin'ny menaka oliva, chestnuts, fromazy ary tantely. Ary manodidina ny truffles koa ny faran'ny herinandro farany amin'ny volana Oktobra dia ny Tartufo Bianco e Nero, any Mugello. Ity festival ity dia mifototra amin'ny truffle mainty ary ny ankizy dia afaka manangona truffles zaraina manerana ny afovoan-tanàna manan-tantara.
Fetibe iray hafa any akaikin'i Florence ny Fetiben'ny holatra Porcini any Certaldo. Tena mora be izy io ary afaka manandrana ny henan'omby Tuscan miaraka amin'ny holatra porcini ianao. Ny fetibe dia isaky ny faran'ny herinandro amin'ny volana oktobra ary maharitra hatramin'ny 5 Novambra. Amin'ny 20 Oktobra kosa, ao amin'ny Piazza Santa Croce azonao atao ny manandrana ny sakafo matsiro eo an-toerana: ny buffala, mozzarella, amin'ny hetsika Sagra della Bufala.
Volana Mozart any Florence koa ny volana Oktobra ary ny teny nalaina dia ao amin'ny mahatalanjona Lapan'i Pitti. Maharitra telo volana ny fihodinana, ny volana oktobra, novambra ary desambra, ary afaka mitahiry tapakila mialoha ianao mba hanomezanao ny tenanao izay tsiro mozika tadiavinao. Mahafinaritra ny mozikan'i Mozart ary mbola bebe kokoa aza amin'ity faritra palatial ity any ampitan'ny Arno.
Mandritra ny volana Oktobra dia misy ihany koa fampisehoana mahafinaritra momba ny Medici: The Medici Dynasty, seho amin'ny teny Anglisy momba ny fianakaviana iray manontolo: harena, fahefana, famonoana olona, ​​mpanakorontana. Mitranga ao amin'ny Convent of Sant 'Onofrio delle Monache di Foligno, ao amin'ny fiangonana baroque kely ao anatiny, ary maharitra adiny iray izay mitambatra teatra, vazivazy ary mozika mivantana. Tena tsara izy io ho toy ny fomba hanatonana ny tantaran'ny Medici nefa tsy mandalo ireo boky tantara.
Tamin'ity taona ity, ho fanampin'izay, mpanakanto iray dia namorona firavaka firavaka nentanin'ny fampisehoana, namboarin-tanana tao amin'ny studio Florentine azy ary azo vidiana eto ihany izany. Fahatsiarovana tsara, raha manontany ahy ianao. Ny fampisehoana dia isan'andro hatramin'ny Jona ka hatramin'ny Novambra (ary andro hafa sisa tavela amin'ny taona), amin'ny 7 ora hariva ao amin'ny Vía Faenza, 48 taona. Mitentina 30 euro ny tapakilas.
Hetsika iray soso-kevitra iray hafa manidina amin'ny balaonina rivotra mafana eo ambonin'i Florence amin'ny festival delle Mongolfiere 28 sy 29 Oktobra ary faran'ny herinandro hafa amin'ny volana Novambra.
Mitety an'i Florence amin'ny fiara
Efa fantatsika fa tsy azo atao ny mivezivezy amin'ny alàlan'ny fiara ao afovoan'i Florence, taxi sy bisy eto an-toerana ihany no mahavita azy. Noho izany, raha tsy tonga amin'ny lamasinina ianao satria nanofa fiara hivezivezy malalaka dia tsy misy safidy hafa ankoatr'izay zaridaina ivelan'ny tanàna manan-tantara.
Ny vaovao tsara dia satria hatramin'ny tapaky ny volana jona dia misy safidy hafa hijanonana. Eo ivelan'ny tanànan'ny Scandicci dia misy a toerana fijanonana lehibe ho an'ny fiara sy bus de Villa Costanza no iantsoana azy, miala ny A1, ny làlambe. Eto dia azonao atao ny mijanona sy mitaingina ny tramway hiditra an'i Florence aorian'ny dia adiny iray monja. Miala isaky ny telo na fahefatra minitra mandritra ny andro ity kamiao ity.
Ny toerana fijanonana dia voaloa ary hitanao fa eo anelanelan'ny fivoahan'ny Firenze-Scandicci sy Firenze-Impruneta amin'ny làlambe A1 io. Misy famantarana hita mazava manambara izany. Omena anao ny tapakila mandeha ho azy ary rehefa miverina ianao, rehefa mandray ny fiara ianao dia mandoa ny onitra. Manana tranokala 505 ny tranokala ary misokatra isan'andro isan'andro amin'ny herinandro 24 ora isan'andro. Afaka mijanona ianao motera ary ny karajia fa tsy misy serivisy na jiro na rano. Ny fijanonana farany ambany dia antsasak'adiny, ny vidin'ny ora voalohany 1 euro, roa mandritra ny adiny efatra, efatra mandritra ny adiny valo ary fito mandritra ny andro iray manontolo.
Misy trano fidiovana, birao fizahan-tany ary trano fisakafoanana mivarotra ny vokatra eo an-toerana. Vidiny lafo izy ireo fa raha tsy te handoa na inona na inona ianao dia tokony hitady a fijanonana maimaimpoana. Soa ihany misy efatra amin'ny sisin'ny tanànan'i Florence: Pizzale Michelangelo, Ponte a Greve, Firenze Certosa ary Galluzzo. Tsy misy mihidy. Raha handao azy tontolo andro ianao, ny voalohany dia mety ary raha hiala amin'ny alina ianao, ny faharoa dia mety satria manana fifandraisana tsara kokoa amin'ny tram sy ny foibe Florentine.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Florencia » Tsidiho i Florence amin'ny volana Oktobra
Carmen Plandiura Golobart dia hoy izy:
Te-handefa vaovao amiko aho momba ny dia izay karakarain'izy ireo sy ny zavatra rehetra azo atao sy azo tsidihina ao. MISAOTRA
Valiny tamin'i Carmen Plandiura Golobart